BursaRayda qalad ilaa midig - Erdem Saker | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaBaydhabo qaldan - Erdem Saker
27 / 12 / 2011 16 Bursa, DUNIDA, tareenka, GUUD, Nidaamka Tareenka fudud (HRS), TURKEY
Khadka Shaqaalaha ee BursaRay Khadka Ganacsiga oo furan xariiqda dhismaha khadka tooska ah ee doodda socota ee rajada ah in dhammaadka sii wadi doono in aan dib ugu laabto Baaqa Xuquuqda / Dulmiga si loo sameeyo baaritaanka. IMO Dood Bursa Madaxweynaha Branch Necati Sahin, Duqa Recep Altepe markii la bilaabay gelinaya mowqifka ka gees ah ku tilmaamay in ay lacag la'aan ah keeni Hotline shaqada leh kaydka ay bixiyaan in wadada sarrifka ay sameeyeen line Jaamacadda, Recep Altepe in xaflada furitaanka Hatter shaqada, iyo dadka reer Ontario, iyo sidoo kale shaqada qandaraasle fulinta ee Waxa uu carrabka ku adkeeyay in qaybtan lagu sameeyay qiimo isku mid ah oo la mid ah isbeddelka mashruuca ka hor madaxda sare. Xaqiiqdii, waxan ka qayb qaatay habka geedi socodkan isbeddelka loo bilaabay, iyo laga yaabee inaan ahaa mid ka mid ah sababaha isbedelka. Taasi waa; Marka dhismaha Jaamacadda line bilowga, wadada ee jaamacadda beddelmay, Teoman Ozalp iyo halkii ay khadka maraya dusha ku yaalla mashruuca ansixiyey DLH sameeyey, wakhtigaygu, aan diidmo tan iyo markii aan ogaaday in kaalinta tunnel ah wadada taas oo ujeedadeedu tahay in ay galaan jaamacadaha ku bilaabay. Waxaan wareejiyo mawduuca laftiisa marka caleema Recep Altepe, baaritaanka aynu u wada dhigtay kooxda farsamada, waxaan tusay reer xamarku ah isbadel ku sameeyey iyagii, wadada way qiil aan dareen-celin u isbedelka iyo habka isbedelka bilaabay. Dabcan, waxaa jiray laba xabbo oo wax lagu beddelayo isbeddelkan, mid ka mid ah dhismaha mashruuca hirgelinta ee waddada cusub, oo shirkadda mashruuca ay daryeelaysay. Caqabaddan ayaa ahayd in ay si isdaba-joog ah u saarto isbeddelkan muhiimka ah ee ah qodob muhiim ah, sida IMO madaxweynaha ku xoojiyay shir-saxaafadeed, kaas oo aasaaska adag lagu dhisi karo oo kaliya heshiis labada dhinac ah oo ku xiran nooca heshiiska. Iyadoo daawashada nidaamka isbedelka, waxaan bartay in mashruuca isbeddelka la sameeyey, in hoos u dhaca helitaanka isbeddelka la xisaabiyo iyo in dhinacyadu ay fadhiyaan miiska si ay u heshiiyaan. Waxaa la ii sheegay in qiimaha dhimista ay sababtay isbeddelku uu yahay qiyaastii 23 Milyan oo Euros oo leh qiimaha qandaraaska, farqigana waxaa loo maleynayaa in loo isticmaali karo in la kordhiyo Qadka Jaamacadda ee Görükleye, laakiin qaddarkan la sii daayay ma ahayn mid ku filan in la kordhiyo. Wakhtigaas OSB Line ayaa la soo celiyay, taas oo keentay in la yareeyo baadhitaankaas, oo leh xarun Korupark oo dhulka hoostiisa ah, oo ka kooban saldhigga Emek above, 2233m. fahamka in dheellitirka qoorta la sameyn karo, dhinacyada fadhiya miiska waxaan saxiixay heshiiska qandaraaska waxaan ogahay isbedelka nuxurka. Cilmi-baarisyadaasi waxay tahay in horumarka, Anigu waxaan ahay Madaxweynaha iyo tirada kooxda, Idaacadda shaqada goobta, waxaa la sameeyaa heerka of dhigto ee hore ee warshad Renault ah, park & ​​kortaan waxaan isku dayay inaan ka dhaadhiciyo in badan intan ka waxtar badan in la eego hawlaha nidaamka, laakiin in ka dib la kulmi on a su'aalo heshiis waan ogaa waxay ahaayeen taxadir buuxinta farqiga u 23 million euros.
Dhanka kale, waa lagama maarmaan in maskaxda lagu hayo in dawladaadu ay si joogto ah ugu socoto baaritaanka Maxkamadda Xisaabaadka ee ku saabsan codsiyada iyo lacag bixinta. Qofka oo xisaabtamaya, waxaan ka socdaa kuwa garanaya dardaaranka aan khaladaadka lahayn ee ka dambeeya saxiixa kasta oo madaxweyne ah. Hawlgalka xakamaynta noocaan ah, Mr.Madaxweyne ma haysto fursad qalin jab ah, sidaas awgeed waxaan rumaysanahay in farqiga, oo si taxadar leh loo xisaabiyo, uu ku saleysan yahay cents sida waafaqsan shuruudaha heshiiska. Xaqiiqdii, ma eegi karno isbedelka mashruuca jaamacadda, ama halkii laga noqon lahaa mashruuc adag oo la ansixiyay, oo ah kaydin aad u muhimsan, ayaa aad uga muhiimsan inuu ka hortago xannibaadda Jaamacadda. Haddii tuneel loo galo Jaamacadda, khadku wuu ku dhammaanayaa, waxa suurtagal ah in aan ka dhigno xariiqdan jaamacadda ilaa Görükleye iyo mustaqbalka, halka khadadka hadda la shaqeeyo ay cad yihiin. Tani waa isbedel aan la iska indho tiri karin. Sida ay fashilka lagu eedeeyay noqotay waddo khaldan Izmir University of Hatti, muddo this topic my, Waxaan jeclaan lahaa in ay xoogga saaraan in mashruuca final baaro aad si taxadir leh geedi socodka samaynta. Taasi waa; Qorshaha Deegaanka ee loo yaqaan "Environment Environmental Plan", kaas oo lagu dabaqay muddadaydii oo loo yaqaan 'Dastuurka Cusub', ayaa dhinaca baadiyaha ah ee loo yaqaan 'Wareegga Beerta' waxaa lagu qeexay Goobta Beeraha ah ee Dabiiciga ah. Dhinaca kale, iyada oo la tixgelinayo in degaanka Özlüce-Ertugrul Kent, oo la furey meel cusub oo degitaan ah, muddadaydii, waxay soo saari doontaa cufnaanta caanka ah ee u dhaxeysa Boosaaso iyo Jaamacadaha, khadka ayaa laga soo qaaday waddada İzmir. Xaqiiqdii, waxqabadka aad u hufan ee xariiqan, mar labaad muddadaydii, garoon cusub oo la qorsheeyay 23bin awoodda dhageysiga - 5bin awoodda dhagaystayaasha ee hoolka gudaha iyo koorsada caadiga ah waxaa soo saari doona Western Sports Valley oo soo saari doona cufnaanta rakaabka, nasiib daro, magaaladan ayaa iftiin doonta iftiinka iftiinka dhismaha ayaa lagu tuuray qashin, markasta oo Jaamacadda Burburka Jaamacadda Burco ka muuqato horteeda, waxaan dareemayaa xanuunka burburkan iiga. Natiijada, isbeddelka isbeddelka ee ku yimaada qandaraaska jaamacada BursaRay, labaduba waa la furay xawaarahii sanadka soo socda, iyo kharashka la yareeyey, 40m, oo wax ku ool ah OIZ iyo Gaadiidka Shaqada ee jihada Mudanya. xariiq dheeraad ah ayaa la helay. Fikradayda, waxaan u maleynayaa inaan u mahadcelineyno arjiga loo sameeyay Bursal ...
Source: Ekohaber - Erdem Saker
Canal Istanbul Wicitaankii ka yimid Imamoglu: 'Qarsoon Qaladkan'
Agaasimaha Gobolka Tanzer Erdem Booqday TÜDEMSAŞ (Sawir Sawir)
Qodobka hoos-u-dhaca Qodobka 16aad ee Xisbiga AK Parti Erdogan
Ma garanayo meesha uu u tagay Gaadiidka Sayniska, miyaad tahay?
Qabashada Ramadaanka ee IDO; Safarka ka socda Eskihisar ilaa Topçular
Ogeysiinta Qaadashada: Kacsanaanta Qabsoomidda Nidaamka Dhexdhexaadka ah ee Sincan iyo Hasanbey
Sincan - Hasanbey Calaamadaha Soo Celinta Nidaamka Dib u Celinta Shaqada Dib ula noqoshada Ganacsiga
Natiijada qandaraaska ee dib u celinta dib u celinta dib u celinta Sincan iyo Hasanbey
Si toos ah ula xiriir Erdem
Si toos ah ula xiriir Teoman
Adeegyada kormeerka shaqada ee Gökçedağ-Nusrat Road
TCDD sida glaze ah